Kushaya Kwako Kuteerera Kunoparadza Yako Yemagariro Midhiya Strategy | Martech Zone
The folks at Brickfish, femu inobatsira mikuru mikuru nehukama hwavo, nharembozha nedhijitari nzira vaisa pamwechete iyi infographic inopa nzwisiso yenyaya hombe mumasocial media. Mazhinji marandi anofunga kuti anopa akakwirira sevhisi sevhisi pasocial media asi chokwadi ndechekuti 92% yevatengi havabvumirani!
Ouch. Takambozvitaura asi makambani akawandisa anosarudza kushandisa vezvenhau kushambadzira uye havana nzira yekushandira vatengi. Izvo hazvina basa kuti rakakura sei rako renhau rezvenhau nderipi apo vatengi vako vanotanga kutaura nezwi pamusoro pekushayikwa kwako kwekuteerera mukutarisira matambudziko avo. Chero zano rekushambadzira iwe rawaifunga kuti raizoshanda rava kutongerwa nekuti vateereri vari kungoona iro rako revashandi sucks.
Ehezve, iyo yekumashure ndeyechokwadi futi. Makambani anoteerera uye anoita kuti basa riitwe anokwanisa kusimudzira kuonga kwevatengi vavo pamhepo. Ndeupi iwe waunofunga kuti uchave nehunhu pakushanda kwako kwekutsvaga?
Tags: pezvitsigabrickfishtime responsekusateererakushamwaridzana nevatengievanhu vezvenhaumagariro enhau
MusanganoHero: An App yeMusangano Kubudirira
Jun 10, 2014 na9:02 AM
Great post Doug !! Ndatenda nekugovana!